Musharaxiinta madaxweynaha Galmudug iyo Warar kii ugu dambeeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 29 June 2015 29 June 2015
Magaaladda Cadaado ee uu ka soconayo dhismaha maamulka gobolladda dhexe ayaa waxaa ka socda olole xoog leh oo ay wadaan musharaxiinta u tartameysa xilka madaxweynimo ee dowlad gobolleedka Galmudug.
Waxaa jira musharaxiin dhowr ah oo ku sugan Cadaado kuwaasi oo wada dadaaladii musharax walba uu ku kasban lahaa xildhibaanadda Baarlamaanka dhawaan la dhisay ee Galmudug, waxaan magaalada Cadaado lagu arkayaa siyaasiyiin iyo xildhibaano Baarlamaanka Federaalka ka tirsan iyo dhallinyaro reer Muqdisho ah oo u kala olaleynaya Musharaxiinta. Wadada laamiga ah ee marta bartamaha magaaladda Cadaado ayaa la dhinac tixay boorar ay ku sawiran yihiin musharixiinta iyo qoraalo kooban oo ka tarjumaya ballan-qaadyadda musharaxiinta , sidoo kale goobaha muhiimka ah ee magaaladda Cadaado iyo gawaarida ayaa lagu xardhay sawirrada musharaxiinta.
Saddexda Musharax ee ugu cad cad dadkuna ay aadka u hadal hayaan ayaa ah Ambassador Axmed Cabdisalam , Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Ambassador Ahmed Macalim Fiqi. Doorashooyinka leh xamaasadda iyo loolanka siyaasdeed ee ka jira gudaha magaaladda Cadaado ayaa ku soo xusuusinaya doorashooyinkii guddoonka Baaarlmaanka iyo madaxweynenimadda Dowladda Federaalka ee Muqdisho ka dhacay sannadkii 2012-dii.
Shacabka gobollada dhexe iyo siyaasiyiinta ayaa isla dhaxmaraya ka hadal musharaxiinta midkooda ku haboon madaxweynenimadda iyagoo marka laga yimaado saadaalinta cida guuleysaneysa sheegaya faa’iidada iyo qasaaraha uu lahaan karo seddexdan musharax mid walba oo ku guuleysta Madaxweynenimada Galmudug.
Doorashaddii Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ee sabtidii la soo dhaafay uu ku guuleystay Cali Gacal Casir ayaa lagu sheegay in ay u dhacady si dumuqraadiyad leh iyada oo kooxo siyaasadeed oo kala tageersanaa labada musharax ee wareega ugu dambeeya isku soo hartay uu dhaxmaray loolan adag oo xamaasadeysan islamarkaana si muran la’aan ah lagu kala baxay.
Cadaado ayaa noqotay fagaaro muhuum ah oo culeys iyo loolan siyaasadeed la qeybsatay Muqdisho islamarkaana ay ku tartamaan kooxaha siyaasadda Soomaaliya iyadoona qaab dhismadkeeda maamulka goboladda dhexe yahay mid ka duwan maamuladda kale ee dalka, lana rajeeynayo in habraac u noqdo maamuladda kale ee dhismi doona.